Ungaba kanjani negumbi lokugezela likanokusho ekhaya | Hlobisa
Indlela yokuba nendlu yokugezela yokunethezeka ekhaya
UMaria Jose Roldan | | Izindlu zangasese
Namuhla kuba lula futhi kulula ukunikeza ukuthinta okunethezeka nobuhle emakamelweni amaningi endlini. Akudingekile ukutshala imali eningi nakuba abantu abaningi bengacabanga ngenye indlela. Indlu yokugezela ingenye yezindawo zendlu ezivame ukuba yivila kakhulu uma kuziwa ekuzilungiseni, ngenxa yomsebenzi okushiwo yilokhu kanye nezindleko ezinkulu zezomnotho ezibangelwayo.
Kodwa-ke, uma uqaphela uchungechunge lwemibono yokuhlobisa kanye namathiphu, ungakwazi ukuvuselela indlu yokugezela, ngemali encane futhi yinikeze lokho kuthinta okunethezeka okufunayo futhi okufunayo kakhulu.
1 Beka udonga lwesibuko
2 Beka i-partition yengilazi
3 Shintsha ifenisha yokugezela
4 Ompompi abasha
5 Sebenzisa imabula
6 Umbala wegolide
7 Ungakhohlwa ukukhanyisa
Beka udonga lwesibuko
Uma ufuna ukuthola umuzwa wokunethezeka endlini yonke yokugezela, asikho isidingo sokudiliza udonga lonke futhi ufake amathayili asezingeni, abizayo. Udonga lwesibuko lungaphezu kokwanele uma kuziwa ekunikezeni indlu yokugezela ngobuhle nokunethezeka. Ukubeka udonga lwesibuko kuzokusiza ukuthi udale umuzwa omkhulu wobubanzi futhi uzuze ukukhanya okukhulu kuyo yonke indlu yokugezela. Ungakhetha ukubeka isibuko esikhulu esihlala endaweni enkulu yodonga noma uthenge izibuko ezincane zokusika futhi udale ukubunjwa okuhambisana nomhlobiso wendlu yokugezela.
Beka i-partition yengilazi
Omunye umqondo uma kuziwa ekwenzeni igumbi lokugezela lizizwe linethezeka futhi linenhle, Kubandakanya ukubeka isikrini esikhulu sengilazi ethreyini yeshawa. Ngokuhlukanisa ingilazi elula, uzokwazi ukunikeza yonke indlu yokugezela umuzwa wobuhle ozowuthanda ngokuqinisekile. Emakethe ungathola izinhlobonhlobo zezikrini, ngakho-ke ngeke ube nenkinga lapho ukhetha leyo efanelekile endlini yakho yokugezela.
Shintsha ifenisha yokugezela
Ukubuyekeza ifenisha kubalulekile futhi uma kuziwa ekutholeni indlu yokugezela yokunethezeka futhi uyinikeze ubuhle. Into etuseka kakhulu ukukhetha ifenisha enama-pastes amade ukuze uzuze umuzwa omkhulu wobubanzi kuyo yonke indlu yokugezela ngaphezu kokuzuza ukuhlala okuhle. Uma ungafuni ukutshala imali eningi efenisha, kuhlale kuwumqondo omuhle ukuvuselela ifenisha futhi ukwenze kubukeke okwamanje kakhulu.
Enye yezinto evame ukudonsa amehlo uma ungena endlini yokugezela umpompi onawo. Uma ompompi bakho sebebadala kakhulu futhi bewohloka kancane kancane ngokuhamba kwesikhathi, yisikhathi esihle sokubashintsha. Ukuthepha okusha okwamanje kungakusiza ufinyelele ukubukeka okuhluke ngokuphelele kuyo yonke indlu yakho yokugezela. Emakethe ungathola amakhulu ompompi abakuvumela ukuthi unikeze lokho kuthinta okunethezeka okufunayo kuyo yonke indlu yangasese.
Imabula iyinto eletha ukunethezeka nobuhle ekamelweni olifunayo. Endabeni yokugezela, kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi imabula ikhona emhlobiso, kungaba phansi noma ezindongeni. Kuyiqiniso ukuthi kuyimpahla ebiza kancane, kodwa ibalulekile lapho indlu yokugezela ikhipha okuthile okuwubukhazikhazi.
Umbala wegolide noma wegolide uyisihluthulelo uma kuziwa ekutholeni indlu yakho yokugezela ukuze unikeze ubuhle kuzo zonke izinhlangothi. Ungakhetha ukusebenzisa i-golden hue kumpompi noma esibukweni sokugezela futhi ungagcwalisi igumbi lonke. Uma indlu yokugezela inkulu, ungakwazi ukwengeza umbala wegolide owengeziwe ezindaweni ezahlukene, njenge-sink, futhi uzuze igumbi lesimanje nenhle ngesikhathi esifanayo.
Ukukhanyisa kuyisihluthulelo futhi kubalulekile uma kuziwa ekuzuzeni indawo ebabazekayo nenhle. Okufanelekile kulokhu ukuba nokukhanya kwemvelo okuningi ngangokunokwenzeka. Ukukhanya okuvela ngaphandle kukuvumela ukuthi udale indawo eyingqayizivele ngaphakathi kwendlu futhi ngaleyo ndlela uzuze indawo ethokomele futhi emangalisayo. Ukukhanyisa okwenziwayo kufanele kubekwe ngendlela yokuthi kusize ukunikeza ukukhanya isikhala esiningi ngangokunokwenzeka. Asikho isidingo sokuchitha imali eningi ezibanini, kusukela okubalulekile ukuthi zinhle futhi zisiza ukudala indawo yesimanje nesimanje.
Ngamafuphi, akudingekile ukwenza imali enkulu yezimali ukuze uthole indlu yokugezela kanokusho nenhle. Ukulandela imibono ethile yokuhlobisa ungaziqhayisa ngendlu yokugezela yesimanje, yesimanje kanye nokunethezeka. Ngakho-ke, akudingekile ukuhileleka ekulungisweni okukhulu lapho ushintsha isici sokuhlobisa igumbi elibaluleke njengendlu yokugezela.
Indlela ephelele ye-athikili: Inicio » Izikhala » Izindlu zangasese » Indlela yokuba nendlu yokugezela yokunethezeka ekhaya
Ifenisha yasekhishini eluhlaza, ukukhetha okukhethekile
Zonke izihluthulelo zefenisha kashoki